7 nhau dzemwedzi waMarch. Vargas Llosa, Lackberg, Ibáñez ... | Zvazvino Zvinyorwa
7 nhau dzemwedzi waMarch. Vargas Llosa, Lackberg, Ibáñez ...
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Comics, Mabhuku, Novela, Nhema nhema, Romance novel
March inovhura nechando, mvura, chando nemhepo, uye zvakare ne nyowani yekuburitsa edhisheni. Nguva dzose zvishoma zvezvinhu zvese uye zvevanhu vese. Nhasi ndinounza mashoma ekubata kwe inoverengeka, nyaya yematsotsi uye komiki. Uye pachangu ndinochengeta iro rakasarudzika edition ye 13, Rue del Barnacle yemudzidzisi Ibáñez, kuti ini ndine mutumbi we comic mazuva ano. Asi ngatitariseiwo kune vamwe.
1 Kudanwa kwedzinza - Mario Vargas Llosa
2 Vanasikana veMvura - Sandra Barneda
3 Nguva yemadutu - Boris Izaguirre
4 Mukadzi Akatsvuka-Bvudzi - Orhan Pamuk
5 Rima Mwanasikana - Elena Ferrante
6 Muroyi - Camilla Läckberg
7 13, Rue del Barnacle. Yakakwana edition - Francisco Ibáñez
Kudanwa kwerudzi - Mario Vargas Llosa
sero nhasi kuzvitoro zvemabhuku ndiko hunyanzvi autobiography iyo Mubayiro weNobel weMabhuku Vargas Llosa. Munyori anotiudza nezvazvo kuverenga kwakaratidza kufunga kwake uye nzira yekuona nyika mumakore makumi mashanu apfuura. Inosimbisa runyorwa rwe vakasununguka vanofunga izvo zvakamubatsira iye kuvandudza mazano ake mushure mekusagadzikana kwemunyori, kutanga neCuban Revolution uye, chechipiri, nekuda kwekuparadzaniswa kwake naJean-Paul Sartre, uyo akamukurudzira zvakanyanya muhudiki hwake.
Saka tine mifananidzo ye Ortega y Gasset, Adam Smith, Karl Popper, Isaiah Berlin kana Jean-François Revel pakati pevamwe, vakamuratidza imwe nzira yekufunga iyo yaipa ropafadzo kune mumwe munhu pamusoro pedzinza, nyika, kirasi kana bato. Uye pamusoro pezvose kwakabuda rusununguko rwokutaura sekukosha kwakakosha. Kune zvisingabvumirwe zvemunyori.
Vanasikana vemvura - Sandra Barneda
Mutori wenhau wechiCatalan uye munyori anonyora mune ino novel a famba uchienda kumatunhu ezvisikwa uye echikadzi chishuwo mune nyaya inotitora kuenda ku 1793 Venice. Ikoko Arabella massari kubva kumuzinda wake anotarisa kusvika kwevaenzi kumafaro makuru ekuzvivaraidza aakaronga.
Pakati pevapindi pane Lucrezia viviani, mwanasikana wemutengesi Giuseppe Viviani, uyo anoenda nemudiwa wake Roberto Manin. Asi Lucrezia haasi kuda kuroora nemurume waanovenga uye achaita zvese zvinogoneka kudzivirira muchato. Uye Arabella anozoona kuti uyu mukadzi wechidiki anonyara ndiye akasarudzwa kuchengetedza nhaka yeaya anonzi vanasikana vemvura, hanzvadzi yapachivande yevakadzi vanorwira kusununguka.
Mamiriro okunze ane dutu - Boris Izaguirre
Zvimwe nhoroondo yehupenyuIno nguva yekutsvaga yakanyanya Boris ine yakanyanya stark asi zvakare ine nyoro nyaya.
Kuziva kwake kwehudiki izvo zvakasiyana, ake ekutanga mota matambudziko uye dyslexia kana mafomu ake ane hunhu uye zviito zvinoratidza zvaari. Vakatenderedza ivo vanotaura kuti izvi zvakakanganiswa ne makambani akaipa Iye mukomana akapoteredzwa nevabereki vake, mutambi ane mukurumbira uye mutsoropodzi wefirimu. Kozouya mazuva echikoro rudo rwekutanga, kubata chibharo, kunyarara, nhanho dzako dzekutanga senge munyori wenhau uye munyori we telenovelas... Uyezve kunouya mukurumbira mukati España game Martian Makoronike uye uve wekupedzisira kuPremio Planeta.
Mukadzi Akatsvuka Bvudzi - Orhan Pamuk
Munyori ane mukurumbira weTurkey anotiunzira a yerudo nyaya uye parricide muIstanbul yema1980 mumusoro mutsva uyu. Kunze kweIstanbul, 1985 tenzi tsime nemudzidzi wake wechidiki vanoshandirwa kuti vawane mvura mubani. Izvo pavanochera vasina rombo rakawanda, a vanenge baba nemwanakomana bond, iyo inozoshanduka kana muyaruki adonha achipenga murudo nechishamiso mukadzi ane bvudzi dzvuku. Urwu rudo rwekutanga runotaridza hupenyu hwako. Uye kutenderedza Istanbul sedimikira renyika iro rakashanduka zvakare risingadzoreki.
Rima mwanasikana - Elena Ferrante
Hazvisati zvanyatsojeka kuti Elena Ferrante ndiani. Uye pasi pazvo pseudonym munhu ari kusaina izvi achiri kuvanzwa pfupi pfupi kwaanotaura nezvake kuvhiringidzika uye kupera simba kwekuva amai.
Aya ndiwo maringe nenyaya ya Anopa, mudzidzisi wemabhuku wechiRungu akarambana kwenguva refu akazvipira kuvanasikana vake nebasa. Kana vaenda kunogara nababa vacho, pachinzvimbo chekunakidzwa ne kushuva uye kusurukirwa inotarisirwa, Leda anongoerekana anzwa asunungurwa uye afunga kushandisa mashoma vacations mutaundi diki riri pamhenderekedzo. Asi mazuva iwayo ekudzikama apera paanoerekana atiza kubva kumahombekombe ne chidhori mumaoko.
Muroyi - Camilla Läckberg
Musoro wekupedzisira we Fjällbacka dzakateedzana, anozivikanwa kwazvo uye akabudirira wemunyori weSweden wematsotsi ematsotsi, asi zvakare nemabhuku evana uye gastronomy. Mhosva nyowani ye Patrik naErica, vaviri vaitungamira vesaga.
Una Musikana wemakore mana anonyangarika kubva kupurazi kumucheto kweFjällbacka. Izvi zvinoyeuchidza vagari vayo kuti Makore makumi matatu zvisati zvaitika nzira yeumwe mwana mudiki akawanikwa akafa nguva pfupi yapfuura yakarasika munzvimbo imwechete. Saka vaviri vechidiki vakapomerwa mhosva uye vakawanikwa vaine mhosva yekutapa nekuuraya, asi vachinzvenga jeri nekuda kwekuti vadiki. Mumwe wavo, Helen, akatungamira hupenyu hune rugare muFjällbacka uye imwe, Marie, mutambi akabudirira uye anodzoka kekutanga mushure mechiitiko chekupfura bhaisikopo.
13, Rue del Barnacle. Yakakwana edition - Francisco Ibáñez
Nezvikonzero zvekunzwa, nekuti ini ndakadzidza kuverenga naye uye nevanhu vake vasingaverengeke uye vanoshamisa, ndakaguma ndine mudzidzisi Ibáñez. 13, Rue del Barnacle inogona kunge iri imwe yeanofarira ma comics enguva dzese. Nekuda kwekuvakwa kwayo, ma protagonists ayo, zvinyorwa zvaro uye mifananidzo yaro, iyo shanduko yakakodzera kuona nekuve nayo.
Ichi chinyorwa chakazara chinounza pamwechete kekutanga mubhuku rimwe chete mapeji ese aakagadzira akateedzana. Kubva payakatanga kuoneka mu 1961, mumagazini Sekuru Vapenyu, vakaombera maoko pamwe chete veruzhinji uye vakaramba vachidaro. Vari mavara asingakanganwiki edu enyambo, asiwo enhoroondo yedu.
La chido, anonyima uye anobiridzira gorofu, the kutadza kubva padenga reimba padenga, anogara achipokana nevanomukweretesa, vane utsinye mouse kuita zvese zvakashata kune vasina mufaro gato kubva padenga reimba. Iyo muridzi wepenjeni uye maroja ake, Zvinotyisa vana yemhuri yakavakidzana ye makororo, ugere muna tsvina, the muvambi wacko kana iyo tailor, the veterinarian… Uye iyo Spider yematanho. Zvese mufananidzo uzere nekusetsa asiwo kushoropodzwa munharaunda zvinoitwa naIbáñez.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » 7 nhau dzemwedzi waMarch. Vargas Llosa, Lackberg, Ibáñez ...
Nhau dzeChat: Iyo Nyowani Chizvarwa Nzira Yekuverenga?
Victor Hugo. Makore 216 mushure mekuzvarwa kwake. Mamwe mitsara uye nhetembo nhatu